Daawo Sawirada: Xukuno kala duwan oo lagu riday Dhalinyardii Gabadha yar ku kufsaday Galdogob!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirada: Xukuno kala duwan oo lagu riday Dhalinyardii Gabadha yar ku kufsaday Galdogob!!
Daawo Sawirada: Xukuno kala duwan oo lagu riday Dhalinyardii Gabadha yar ku kufsaday Galdogob!!
Jan 29, 2017WARAR
Waxaa sidoo kale goobta xukunka ka dhacayay ku sugnaa Ehelada dhalinyardaa xukunka lagu ridayay iyo Ehelada gabadha la kufsaday, waxaa sidoo kale gobta xukunka ka dhacayay ku sugnaa dad badan oo Deegaanka ah kuwaas dhoortay in xukunka lagu ridi doono dhalinyaradan.
Previous PostDaawo Sawirada: Shacabka Mareykanka oo bilaabay Dibad baxyo ku diidan yihiin Sharci uu saxiixay Trump!! Next PostDaawo Muuqaalo Muhiim ah "Sidee lagu ogaan karaa waxyaabaha Khamradda iyo DOofaarka ay ku jiraan!!